नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकलको जन्म , हामी सवैले गर्व गरौ - VOICE OF NEPAL
६ पुष २०७६, आईतवार १०:०१
481 ??? ???????
नेपाली युवाहरुको सपना पुरा भएको छ । यो नेपाल र नेपालीकालागि गर्वको कुरा हो ।यि हाम्रा युवाहरुसंग मेरो परिचय त छैन् तर यिनको कामसंग मेरो परिचय लगभग नजिक बनाईदिएको छ । आज मेरो वालबाट सेअर गर्दैछु ।
किनकी यो प्रयास सफल त भयो तर नेपाली युवाहरुले अत्यधिक मन पराएर आफ्नै नेपालमा बनेको बाईकलाई प्रयोगमा ल्याएर विदेशी दलाल सामु नेपालको प्रोडक्शन लाई सम्मान गर्ने समय आएको छ ।विदेशी सामानलाई विस्तारै विस्थापित गर्ने अवसर नेपाल सामु आएकाले यस्को भरपूर सदुपयोग गरौ ।
अशिम जी ले त्यहाँका कम्पनीले चारपाङ्ग्रे गाडी कसरी निर्माण गर्दा रहेछन् भन्ने ज्ञान प्रयोगात्मक हिसाबले सिक्न पाएको उनी बताउँछन् । ‘डोंकरभूर्ट’ कम्पनीमा काम गर्दा सिकेको ज्ञान नेपालमा समेत प्रयोग गर्न सके देशका लागि धेरै फाइदा हुने सोचले नेपालमा काम गर्ने योजना बनाएका हुन् ।
सन् २०१७ मा नेपाल फर्केपछि कम्पनी खोल्ने योजनामा लागे, अशिम । यो कदम नेपाल र नेपालीकालागि गर्व गर्न लायकको हो ।विस्तारै नेपालकै माटो सुहाउदो प्रोजेक्टहरुले स्थान पाउने छ । सवैभन्दा लाभान्वित हामी नेपाली नै हुनेछौ ।
‘यात्री मोटरसाइकल्स्’ नेपालमा पहिलो पटक दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय मोटरसाइकल बनाएर (उत्पादन गरेर) बजारमा ल्याउने काम सफल भएको छ। विद्युतीय मोटरसाइकलका लागि आवश्यक पार्टपुर्जाहरू आफैंले डिजाइन गर्ने र डिजाइन अनुसारका पार्टपुर्जा तयार गर्ने फ्याक्ट्रीलाई अर्डर दिएर देश बाहिरबाट मगाउने गरेका छन् ।
नेपालमा उपलब्ध नहुने पार्टपुर्जाहरू युवा इन्जीनियरहरुले आफै डिजाइन गरेका हुन् । मेनुफ्याक्चर्स पार्टनर्सका रूपमा रहेका कम्पनीलाई अर्डर दिइन्छ ।
उहाहरुको डिजाइन अनुसारका सामान तयार भएपछि मेनुफ्याक्चर्स पार्टनर्स् कम्पनीले तुरुन्त नेपाल पठाउँछन् ।विशेष गरेर यूएस, नर्थ अमेरिका, चाइना, भारत लगायत यूरोपेली देशहरू मेनुफ्याक्चर्स पार्टनर रहेका छन् । यो हो समृद्धिको पहिलो पाईला ।
युवाहरु सवै जागौ । आफ्नो ठाउबाट सवैले भुमिका खेलौ । देशमै बनेका सामानहरु प्रयोगमा ल्याउ । देशलाई छिट्टै समृद्ध, शक्तिशाली र सुन्दर बनाऔ ।